Megastar Amitabh Bachchan oo si ka duwan sida dadka kale ugu hambalyeeyey Katrina Kaif Sanad guuradeeda 33aad. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Bollywood » Megastar Amitabh Bachchan oo si ka duwan sida dadka kale ugu hambalyeeyey Katrina Kaif Sanad guuradeeda 33aad.
Megastar Amitabh Bachchan oo si ka duwan sida dadka kale ugu hambalyeeyey Katrina Kaif Sanad guuradeeda 33aad.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 16-07-16 11:17 AM Megastar Amitabh Bachchan ayaa kamid ahaa raxan dad ah oo quruxleyda Ingiriiska iyo Hindiya ay iska dhaleen dadka ugu soo hambalyeeyey dhalashadeeda iyada oo xalay 33 sano jirsatay.
Big B ayaa boggiisa Twitter ka ugu hambalyeyey quruxleyda wax ka jishay film ka Fitoor.. waxa uuna yiri “Farxad had iyo goor… Film keeda ugu horeeyey aniga ayey ila jishay midkii xigayna Sarkaar”.
Dhanka kale Katrina Kaif ayaa lagu arki doonaa goor dhaw film ka Nitya Mehra ee Baar Baar Dekho waxaana film kan la jili doono saaxiibadii hore ee Salman Khan jilaaga dar darta xoogan ku socda ee Sidharth Malhotra.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in Amitabh Bachchan oo ay dadka ugu dambeysay markii uu wax ka jilay film ka TE3N lagu arki doono film ka Pink.